Isku-darka midabbo xumada Gugan | Bezzia
Isku-darka midabka geesinimada leh ee guga
Maria vazquez | 26/04/2021 18:00 | Maxaan xirtaa
Waxaa jira dad badan oo naga mid ah oo ka hela midabbo dhexdhexaad ah xulaf weyn si loo abuuro labiskeenna maalinlaha ah. Kuwani waxay noo oggolaaneysaa inaan si fudud u abuurnno isku-dhafnaan annagoo ku ciyaarna dhar kala duwan innaga oo aan ka fekerin. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira kuwa had iyo jeer ah diyaar u ah halista
Emili Sindlev, Leonie Hanne, Elena Giada iyo Blaire Eadie kaliya kama baqayaan midabka laakiin waxay ka dhigteen astaamo. Oo markaan fiirino akoonadooda 'Instagram' waxaa lagu dhiirrigalin karaa inaan abuurno isku darka galmada
Wax la mid ah ayaa ku dhaca midab ahaan sida dharkaas aan u baran in la isticmaalo oo maalin maalmaha ka mid ah ayaan go'aansanay inaan iibsanno. Waqtiyada ugu horeeya waxaynu isku arki doonnaa qariib badan isticmaalkeeda; goor dambe, waannu u tagnaa iyada. Barashada isha ayaa ah waxa kaliya ee ay tahay inaan sameyno. Ku bilow inaad ku darto farqiga u dhexeeya plugins halkaasna horay uga sii soco hadaadan aad u qancin.
Laakiin aan u nimaadno ujeeddada, isku-darkaas oo nagu martiqaadaya inaynu halista ugu jirno guga. Mid ka mid ah kuwa aan ugu jecel nahay waa midka sameeya fuchsia iyo cagaar. Waad kala dooran kartaa inta udhaxeysa cagaarka kala geddisan, inkasta oo aanan caawin karin laakiin aan muujin karno doorbidkeena cagaarka huruudda ah.
Liin iyo buluug sameyso soo jeedinteena labaad. Waa isku-dar aad u dhiirran haddii, sida Emili, aad ku sharraxdo isku-darka dharka ee codadka aadka u daran ee, hase yeeshee, ay fududahay in la jilciyo. Sidee? Doorashada dharka buluugga ah ee tones pastel sida Giada ayaa sameysay.
Sidoo kale waad isku dari kartaa liin iyo lilac. Lilac ayaa door hoggaamineed ka ciyaartay ururinta ugu dambeeya ee gu'ga-xagaaga waana sii wadi doontaa sidaas. Waa midab sifiican ugu shaqeeya labada cod ee diiran iyo kuwa qabowba. Waad isku dari kartaa labada jaalle iyo fuchsia si aad u abuurto isku-dhaf midab geesinimo leh guga.
Sawirro - @abdihakin_abdi, @Elenagiada, @abdihakin_abdi, @Maryanhaqanshe, @abdihakin_abdi, @xDayaannax, @blaireadiebee
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » fashion » Maxaan xirtaa » Isku-darka midabka geesinimada leh ee guga
Sida loogu qurxiyo qaabka boho-guridda
Cunnooyinka Ketogenic, wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato cuntada Keto